Magangalyo Doon Soomaali ah oo loo haysto Burcad Badeednimo Wadanka Talyaaniga. – Hornafrik Media Network
Booliska Talyaaniga ayaa Xiray Wiil Dhalinyaro ah oo 24 Jir Soomaali ah, kaasoo loo haysto inuu ka mid ahaa Burcad Badeed Alshabaab ah oo ka afduubtay Gacanka Cadmeed Markab Shidaal oo laga leeyahay Talyaaniga Sannadkii 2011-ka.
Markabka Talyaaniga iyo Shaqaalihiisa ayeey Burcaddu haysteen 10 Billood, iyagoo kadibna sii daayay markii la siiyay 11 Milyan oo Madax Furasho ah.
Mohammed Farah oo ah Wiilka Soomaaliga ah ee la qabtay waxaa xiray Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Carabinieri, kadib markii uu Magangalyo ka dalbaday Magaaladda Sicilian ee Caltanissetta, sida ay Boolisku sheegeen.
Saraakiisha Boolisku waxay isticmaaleen Xogta illaa 50 Burcad Badeed ah oo Farahooda la kaydiyay, kadib markii ay qabsadeen 8 February 2011 Markabka Savina Caylyn Tanker, iyagoo isticmaalayay Gantaaladda Garabka laga rido iyo Hubka sida Darandooriga ah u dhaca.
Madaxfurashadda laga bixiyay Markabkan waxaa la siiyay Kooxda Alshabaab, kadib markii la jirdilay Shaqaalihii Markabka oo ka koobnaa 5 Qof oo Talyaani ah iyo 17 Hindi ah, iyadoona si xun loola dhaqmay 10-kaas bilood ee ay Burcadda gacanta ugu jireen.
Boolisku waxay heleen Faraha Burcad Badeeda, markii ay sii daayeen Markabkaasi. taasoo sahashay in hadda la qabto mid ka mida Burcadii haysatay Markabkaasi.